Ranniko,: प्लान्ट काग आँखा मानिसहरू बीच फरक नाम छ भालु बेरी, crows घाँस, काग बेरी, कालो cohosh, क्रस-घाँस। यसलाई आफ्नो चमकदार काले जामुन गंभीर विषाक्तता पैदा गर्न सक्छ संग ध्यान आकर्षित, र सोही समयमा निको गुण छ। को काग आँखा कहाँ बढ्छ छ र यो चिकित्सा प्रयोग कसरी?
काग आँखा जस्तै केन्द्रिय रूस, साइबेरिया, को काकेशस युक्रेनको, बेलारुस रूपमा क्षेत्रहरु मा पाइन्छ। यो बोट नम माटो रुचि र छायादार अनित्य, शंकुधारी वा मिश्रित वन मा ब्रश मा, ravines को ढलान पाइन्छ। पत्र पाना तल 30 सेमी को एक बाला उचाइ दुई मा cleaved छ। शीर्ष -4थप ovate एक चुच्चा टिप संग पाना-राउन्ड आकार। यस कारण, आँखा को विज्ञान मा चार-काग भनिन्छ। तर, पनि तीन वा पाँच पात संग बिरुवाहरु छन्।
Rhizome बिरुवाहरु creeping र लामो, यो चाँडै अलग बढ्न सक्छ। संयंत्र एक बारहमासी छ, र rhizomes देखि बढ्न कि बीउ र मार द्वारा दुवै उर्तानु गर्न सक्नुहुन्छ। एक खण्ड भाग्न हरेक वर्ष काग आँखा थपिएको छ। तिनीहरूलाई गणना गरेर, हामी बोट कसरी पुरानो निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
फूल काग आँखा मई मा सुरु हुन्छ। तर, यसको फूल टिप्पणीमा धेरै गाह्रो छ: तिनीहरू तर ठीक छैन, तर किनभने greenish रंग को ध्यान आकर्षित गर्दैन। आफ्नो दृश्य मा लामो पलायो कसरी फूल भन्न गाह्रो छ। उहाँले सधैं सुरुमा र फूल को अन्त मा नै देखिन्छ। एक pestle एक भ्रूण परिवर्तन छ रूपमा Stamens र tepals बस मा सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो। जुलाई र अगस्ट मा धेरै हडताली ठूलो जामुन तिनीहरूले पूर्ण परिपक्वता पुग्न र स्पष्ट पात को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध देखिने छन्। - यी शानदार फल देख तरिका म काग आँखा विश्वास गर्न चाहँदैनथे, (यसको नाम किनभने काग को आँखा र बोट आफ्नो समानता को पायो) एक विषालु बोट। यद्यपि, यो त छ: र जामुन, र पात, एकचोटि शरीर मा, गंभीर विषाक्तता हुन सक्छ। यसलाई उल्टी, पखाला, चक्कर आना, गंभीर पेट दुखाइ, convulsions र हृदय असामान्यताहरु अप सँगसँगै छ एक हृदय गिरफ्तारी।
के काग आँखा व्यवहार देखि?
मध्य युग मा एक बिरूवा काग आँखा-जन्तरको छलफल भएको थियो। मान्छे यो ENCHANTED disenchant र विपत्ति र अन्य यस्तै रोगहरु तिनीहरूलाई रक्षा सक्ने विश्वास गरे। यो अन्त गर्न, बिरुवाहरु जामुन फसल र आफ्नो लुगा sewed थिए। तर सामान्य मा, बिरुवाहरु डराएका थिए, र धेरै छैन अक्सर प्रयोग।
आजकल, को बिरूवा मात्र लोक चिकित्सा र Homeopathy मा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले पात र जामुन प्रयोग। पातहरु को गर्मी भर फसल हो, र जामुन जुलाई वा अगस्ट मा फसल छन्। तिनीहरूले ventilated भएको एक कोठा मा चाँडै सुकेको गर्न आवश्यक छ।
Homeopathy मा ताजा बोट रस व्यवहार ब्रोंकाइटिस, rheumatism, आँखा, को रोगहरु टाउको दुखाइ र चक्कर आना। शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि र विरोधी भडकाऊ गुण छ जो लोक चिकित्सा प्रयोग घाँस, फूल, समयमा संकलित, मा।
ड्राई shredded पात को जलसेक अनिद्रा लागि प्रयोग हुन सक्छ, र convulsive अमेरिका, माइग्रेन। ताजा पात र जामुन चोट (बराबर अनुपात मा) बाट Alcoholate यस्तो माइग्रेन, tremors र मस्तिष्क contusions, arachnoiditis, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी क्षयरोगका रूपमा रोगहरु मा मद्दत गर्छ। तपाईं औषधीय उद्देश्यको लागि बोट बाली निर्णय भने, कच्चा माल र औषधि ताला र चाबी अन्तर्गत राखिएको र खाना टाढा थिए निश्चित गर्नुहोस्। कारण विषालु फल र पातहरु काग आँखा विशेषज्ञहरु संग परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। पनि बोट नै कारण ठूलो लोकप्रियता को लागि आधार मा यो केवल सानो खुराक मा सम्भव छ छैन लोक चिकित्सा, र उपचार लागूपदार्थ छ।
आफ्नो घर को राजसी सौन्दर्य - calla। घरमा हेरचाह
को खिडकी मा टमाटर को बिरुवा: खेती को नियम
नरिवल सब्सट्रेट briquettes: समीक्षा कसरी प्रयोग गर्ने
Croton - सौन्दर्य को connoisseurs का लागि एक फूल
फिएट पैसा के हो? कसरी Calculate मातृत्व भुक्तानी: कदमले चरण पुस्तिका
टमाटर र आफ्नो खेती को प्रारम्भिक प्रजातिहरू
Vincenzo Bellini, इटालियन रचनाकार: जीवनी, रचनात्मकता